बाबुरामको आक्रोश : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
बाबुरामको आक्रोश : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहने टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन घोषणा गरेसँगै डा. भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, पहिल्यै साख गुमाइसकेको राष्ट्रपति संस्थाले यस्तै’जो रक्षक उही भक्षक’को भूमिका निर्वाह गर्नु के आश्चर्य भयो र? वर्तमान राप र प्रमको टिम रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहनेछ भनेर हामीले भन्दै आएको कुरा पुनःपुष्टि भएको छ! प्रतिगमनका अरू शृंखला क्रमश:उद्घाटित हुनसक्छन् । प्रतिरोध गरौं!
पहिल्यै साख गुमाइसकेको राष्ट्रपति संस्थाले यस्तै’जो रक्षक उही भक्षक’को भूमिका निर्वाह गर्नु के आश्चर्य भयो र? वर्तमान राप र प्रमको टिम रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहनेछ भनेर हामीले भन्दै आएको कुरा पुनर्पुष्टी भएको छ! प्रतिगमनका अरू शृंखला क्रमश:उद्घाटित हुनसक्छन्।
पहिल्यै साख गुमाइसकेको राष्ट्रपति संस्थाले यस्तै’जो रक्षक उही भक्षक’को भूमिका निर्वाह गर्नु के आश्चर्य भयो र? वर्तमान राप र प्रमको टिम रहेसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहनेछ भनेर हामीले भन्दै आएको कुरा पुनर्पुष्टी भएको छ! प्रतिगमनका अरू शृंखला क्रमश:उद्घाटित हुनसक्छन्।प्रतिरोध गरौं! pic.twitter.com/FKtvtkMS8x
— Baburam Bhattarai (@brb1954) December 20, 2020